थाहापाउनुहोस् : यी हुन् टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्ति ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
थाहापाउनुहोस् : यी हुन् टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्ति !
९ मंसिर २०७७, मंगलबार ००:००
अहिलेको युवायुवतीको मुख्य रोजाइमा परेको टिकटक एक सामाजिक सञ्जालको मनोरन्जनको मुख्य साधन बेनेको छ । बर्तमान समयका कोरोना भाइरसको कारण सम्पूर्ण क्षेत्र थलापरिरहेको अवस्थामा टिकटक चलाउनेको संख्या झन बढ्दै गएको छ ।
यसलाई कति मानिसले आफ्नो पतिभा देखाउने साधनस्रोतको रुपमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । आज हामी तपाईलाई एक झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिएका छन् ।
टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने चार्ली डिमेलियो अमेरिकी नागरिक हुन् ।एक १६ वर्षीया किशोरी भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्ति बनेकी छिन् । चार्लीले झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा नै यो उपलब्धि हासिल गरेकी हुन् ।
आफ्नो परिवारसँगको रियालिटी सिरिजको पहिलो एपिसोड ‘डिनर विथ द डिमेलियोज्मा’ उनले खाना तयार बनाउने शेफलाई अभद्र व्यवहार देखाएको उनका फ्यानले दाबी गरेका छन् ।
त्यसको विरोधमा ६ लाख फ्यानले उनलाई अनफलो नै गरे ।डिमोलियाले एउटा माफी मागेको भिडियो शेयर गरेपछि अहिले विवाद मत्थर भएको छ र आउँदा दिनमा यस्तो व्यवहार नगर्ने बताएकी छिन् ।
एउटा युट्युब भिडियोमा चार्लीको व्यवहारलाई लिएर विवाद भएको भोलिपल्ट उनले उपलब्धि हासिल गरेकी हुन् । आफ्नो उपलब्धिलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेकी छिन्, ‘१० करोड जनाले मलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्, पत्याउनै गाह्रो छ ।’
यी १६ वर्षीया किशोरी बहुप्रतिभाशाली छिन्, उनले फिल्मका साथै ठूला मेकअप तथा फेसन ब्राण्डसँग काम गरिसकेकी छिन्
।उनले टिकटकमा विशेषगरी बन्द कोठामा नाचेको भिडियो शेयर गर्दै आएकी छिन् ।एजेन्सी
प्रकाशित मिति: Nov 24, 2020
‘दुलाह’ बन्दै रमेश प्रसाईं, कल्पनासँगको ‘चक्कर’ हल्ला मात्रै
पब्लिक स्पिकर रमेश प्रसाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भएका छन्। फरक क्षमताका प्रसाईंले काठमाडौँ कालीकोटकी नन्दा
वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कोरोनामुक्त
वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कोरोनामुक्त भएका छन् । ११ दिनको अस्पताल बसाइँ पछि गजुरेल